သက်ဝေ: ချက်ခြင်း၏ အနုပညာ
ကလူသစ် October 28, 2010 at 11:15 PM
၂ခါရှိ၊ နှစ်ခိရှာသွားပြီဆိုတော့ ခေါ်ကျွေးသင့်ပြီထင်တယ်...ငှင်း ငှင်း
အပြုံးပန်း October 28, 2010 at 11:15 PM
ချက်နည်းတော့ မသက်ဝေချက်တာနဲ့ တူသလိုပဲ၊
Hmoo October 28, 2010 at 11:34 PM
တော်တာ တော်တာ ငှါးမယ်နော်
ဇွန်မိုးစက် October 28, 2010 at 11:42 PM
မအိပ်ခင် စက်မပိတ်ခင်လေးမှာ အစ်မရဲ့ပို့စ်အသစ်တက်တာတွေ့လို့ လာငတ်...အဲလေ..လာဖတ်သွားပါတယ်။ ဇွန်လည်း ဟိုတုန်းက ချက်ဖူးတယ်။ အင်တာနက်ထဲကရှာတွေ့တဲ့ ချက်နည်းအတိုင်း ချက်ကြည့်လိုက်တာ ဖြစ်သွားတယ်။ ကြက်သားကိုတော့ ဒိန်ချဉ်နဲ့နယ်ပြီး တစ်ညသိပ်ထားလိုက်တယ်။ ဆန်ကို အပျော့တစ်ထပ်၊ အမာတစ်ထပ်ခွဲပြီး ချက်တယ်။ သစ်ဂျပိုးနဲ့ ကရဝေးရွက်တွေကို ထောပတ်ဆီနဲ့သတ်လိုက်တယ်။ ကြက်သွန်ကြော်ရတာတော့ လက်တညောင်းပဲ။ ချက်နည်းအတိအကျတော့ မမှတ်မိတော့ဘူး၊ ကိုယ်တိုင်ဒံပေါက်ချက်မစားဖြစ်တာ ၆နှစ်လောက်ရှိပြီဆိုတော့.. :D
ဇွန်မိုးစက် October 28, 2010 at 11:43 PM
ကျန်သွားလို့... အစ်မတို့ ချက်တာပဲ လိုက်စားမလားလို့ စိတ်ကူးနေတယ်...အဟဲ
Anonymous October 29, 2010 at 12:01 AM
အမ.. အစာနဲ့မျှားတော့ လာအနံ့ခံ..အဲ..ဟုတ်ပေါင်.လာစားသွားတယ်။
ဂျူနို October 29, 2010 at 12:18 AM
စိတ်ညစ်တာ် ကြီးတော်ရယ် ဖေ့စ်ဘွတ်မှာ နှိပ်စက်တာ အားမရလို့လားးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး။
nu-san October 29, 2010 at 12:25 AM
မမရေ... မီးပူတိုက်ရင်း လာကြည့်မိလိုက်တာ.. ငါးပါးမှောက်ရော.. ဗိုက်ဆာလာပြီဗျို့.. နောက်တစ်ခါ မမရဲ့ နည်းအတိုင်း ထမင်းကို နှပ်ကြည့်ဦးမယ်... ဒါ့ပုံလေးတွေကလည်း ရိုက်တဲ့သူတော်တော့ ဒန်ပေါက်စားချင်စိတ်ကို ပေါက်လာတယ်.. :D
သက်ဝေ October 29, 2010 at 12:26 AM
နှိပ်စက်တာ ဟုတ်ပါဘူး မအယ်ရယ်... မျှဝေတာပါ...း))
ကလူသစ်၊ ညီမဇွန်... နောက်တခါ ချက်ရင် ခေါ်မယ်နော်... မလာရင် အသိပဲ...
ညီမ မြတ်နိုး... လာလည်ရင် ချက်ကျွေးမယ်လေ...
အပြုံးပန်း... ချက်ပါအုံး... ချက်ပြီးရင် ပြနော်...
Hmoo... ဒီလိုငှားလို့ ရရိုးလား... :P
ညီမ နုစံ... ချက်ကြည့်ပါ... မခက်ပါဘူး... လုပ်ရတာ နဲနဲ အမယ်များတာ တခုပါပဲ...း))
ညီမလေး October 29, 2010 at 12:35 AM
စားခြင်း အနုပညာကို သိချင်ပါတယ် မမး)
Moe Cho Thinn October 29, 2010 at 1:19 AM
ကလူသစ်ကို ထောက်ခံပါတယ်။ :))
မေဓာဝီ October 29, 2010 at 1:44 AM
စလုံးရောက်ရင် အမသက်ဝေရဲ့ အိမ်တံခါးခေါက်ပြီး မျှဝေဖို့ ပူဆာရအုံးမယ် ... အဲဒီတော့မှ ထွက်မပြေးကြေး :)
Anonymous October 29, 2010 at 1:51 AM
အဲ့လိုပဲ ခေါ်မယ် ခေါ်မယ် ပြောနေတာ ခနခန ကို ရှိရော...ခေါ်သံလဲ မကြားမိ...
Sunny October 29, 2010 at 2:26 AM
အစ်မ ဒံပေါက်က ရောင်စုံလေးနော်.. စိတ်ရှည်လက်ရှည်ချက်ထားတာ စားကောင်းမယ့်ပုံပဲ..
khin oo may October 29, 2010 at 3:00 AM
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) October 29, 2010 at 4:55 AM
ဒါပေမဲ့ အရင်ကုန်တာက ကြက်သားဟင်းများ ဖြစ်မလား မသိဘူးနော်။
မျှဝေတာ ကျေးဇူးပါ။ တကယ်ကျွေးပြီး မျှဝေရင်လဲ သိပ်ကောင်းမှာဘဲး)
T T Sweet October 29, 2010 at 6:46 AM
အန်တီသက်ဝေရဲ့ လက်ရာကိုတော့ အဘား အဘား အော်သွားပြီ။ မိုက်တယ်။
စောစောစီးစီး လာကြည့်မိတာ ခုချက်ချင်း ဒန်ပေါက်စားချင်စိတ်ပေါက်သွားပြီ။ ၀ဋ်လည်တာဖြစ်မယ်။
ချက်စားမယ် .... ချက်စားမယ် .... ချက်စားမယ် ဟု ၃ကြိမ် ၃ခါတိတိ ကြွေးကြော်သွားပါကြောင်း။
ချစ်ကြည်အေး October 29, 2010 at 8:57 AM
Hello !! How are you ??
Have we met each other before ??
(ဒန်ပေါက် မျက်နှာကို စေ့စေ့ ကြည့်၍ နှုတ်ဆက်သွား...)
sonata-cantata October 29, 2010 at 9:00 AM
ဒန်ပေါက် ကတော့ ကိုယ်နဲ့မတည့်တဲ့အစာပဲ
ကဲပါလေ... ထုံးစံအတိုင်း ရောဂါတွေ မသိချင်ယောင်ဆောင်ပြီး တွယ်လိုက်ပါဦးမယ်...
ZZZ October 29, 2010 at 9:10 AM
ပုံတွေမြင်ရတာ စားချင်စရာကြီး ချက်နည်းက သိပ်တော့မလွယ်လှဖူးဗျို.၊ ၀ယ်စားလိုက်တာပဲ ကောင်းမယ်ထင်ပါတယ်
ဧပရယ်လ်ပူး@ပူးတေ October 29, 2010 at 9:34 AM
မမသက်ဝေရဲ့ဒန်ပေါက်အရောင်လေးက တကယ့် ဒန်ပေါက်နဲ့ တူတယ်.... မကြိုက်တဲ့ အစားစာတွေထဲမှာ တခုအပါဝင်ပဲ။ အလှူအိမ်သွားလို့ ဒန်ပေါက်နဲ့တိုးရင်တောင် ထမင်းဖြူစားခွင့်ကြုံရင်စားပြီး အချိုပွဲပဲ စားခဲ့တာများတယ်... ဒါပေမယ့် ခုလိုလေးတွေ့တော့ စမ်းချက်ကြည့်ချင်တယ်... စနေနေ့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အိမ်မှာ မိုနိုပိုလီဆော့ဖို့ ချိန်းထားသေးတယ်.... ချက်ရကောင်းမလား စဉ်းစားနေတယ်....ချက်ခြင်းရဲ့ အနုပညာကို စိတ်ဝင်စားပေမယ့် ပင်ပန်းပြီး နောက်ရက် အလုပ်မသွားနိုင်မှာလဲ ကြောက်ရသေးတယ်.. အရမ်းပင်ပန်လားဟင် မမ။
(အရမ်း အရမ်းကို လက်တည့်စမ်းချင်နေသူ)
ဇွန်မိုးစက် October 29, 2010 at 9:43 AM
အမရေ... ဒံပေါက်အကြောင်း စိတ်စွဲသွားတာ မနက်ထိပဲ။
spices တွေနဲ့အတူနယ်ထားတဲ့ ဒိန်ချဉ်နဲ့တစ်ညသိပ်ထားတဲ့ ကြက်သားကိုလေ မချက်ဘဲ ဆီစစ်ထားတဲ့ ကြက်သွန်ကြော်တွေနဲ့အတူ ရောနယ်ပြီး အိုးအောက်ဆုံးမှာထားပြီး အပေါ်ကနေ ထမင်းတွေကို အလွှာလိုက်ပြန်ခင်းတာ။ ထမင်းနပ်သွားတဲ့အချိန် ကြက်သားကလည်း နူးအိပြီး ဆိုင်ကအတိုင်း ထွက်လာတယ်။ အာဗန်ရှိရင် ပိုအဆင်ပြေတယ်။ ဇွန်မချက်ဖြစ်တာ အိမ်မှာ အာဗန်မရှိတာလည်း ပါတယ်။ အခုအမချက်တာ အားကျပြီး memory ကို recall ပြန်လုပ်မိသွားတာ။
တကယ်တော့ အစာအိမ်သမားနဲ့ ဒံပေါက်က မတည့်လှဘူး။း(
မိုးငွေ့...... October 29, 2010 at 10:01 AM
စကာင်္ပူလာရင် မမသက်ဝေလက်ရာ လာစားမယ်..:P
ဖြူ October 29, 2010 at 10:06 AM
သက်ဝေက ဒီလိုတွေလဲ ရတယ်ပေါ့...
တော်လိုက်တာ... (တကယ်ပြောတာပါ ဒီလိုတွေ အစုံရဖို့ မလွယ်ဘူး...)
အရင်က သက်ဝေဆီမှာ ဟင်းချက်တာတွေ တင်တာ မတွေ့ဖူးဘူး... ဒီပိုစ့်က ပထမဆုံးပဲ ထင်တယ်နော်...
နောက်လဲ ချက်ဖြစ်တာလေးတွေရှိရင် မျှဝေပါအုံး...
Vista October 29, 2010 at 10:25 AM
ဖဘမှာ နှိပ်စက်ရတာ မဝလို့ လားအင် ..ဟွင့်
သက်ဝေ October 29, 2010 at 5:39 PM
စလုံးက မဟုတ်ကြတဲ့ သူများ ဒီကိုရောက်ရင် အကြောင်းကြားပါ... တကယ်ကြီးကို ချက်ကျွေးပါ့မယ်...
စလုံးက အိမ်နီးချင်း ဘလော့ဂ်ဂါများ... အခါအခွင့်သင့်ရင် ချက်ကျွေးမှာပေါ့... ဒါပေမယ့် ခက်တာက ဖိတ်ရင် မလာကြတာက ဆိုးတယ်... (ကိုယ်က အစ... :P)
ညီမ ဇွန်... Oven နဲ့ ဘယ်လိုချက်ရမှန်းမသိဘူး... Oven က ပူတင်းနဲ့ Honey Chicken ပဲ လုပ်စားဖြစ်နေတယ်...
ညီမ ပူးတေ... လိုအပ်တဲ့ ပစ္စည်းတွေ နည်းနည်းချင်းစီ ကြိုဝယ်ထားနိုင်ရင် မပင်ပန်းလှပါဘူး မဟုတ်ရင်တော့ တောင်ပြေးလိုက် မြောက်ပြေးလိုက်နဲ့ သိပ်မလွယ်ဘူး... အမဆို မချက်ခင် ၂ ရက် ၃ ရက်လောက်ထဲက အဆင်သင့်သလို ကြိုဝယ်ထားတယ်...စမ်းကြည့်ပါ ညီမ... အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်...း))
ဒီပိုစ့်ကို လာရာက် အားပေးကြသူများကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်...။
မောင်လေး October 29, 2010 at 9:50 PM
ရွှေရတုမှတ်တမ်း October 30, 2010 at 7:49 AM
တကယ်မျှဝေချင်ရင် ...ဒီတခါချက်ပြီး မျှဝေလိုက်လေ...
စ လုံးလာရင်တော့ ငါ့နှမကို သေချာချက်ကြွေးခိုင်းမယ်...
May I know where to buy gee butter at SG? if u dont mind pls show me the photo of gee butter. Thanks
အင်ကြင်းသန့် October 30, 2010 at 10:06 AM
မမ....တကယ်ချက်ကျွေးမှာဆို ဂျင်းကိုလည်းချန်မထားရဘူးနော်။း)
Interesting Comment from Khun Cho Facebook...
It's really matching with this post...!!!
Cooking isaform of art that eventually metamorphoses food into pieces of...... :)
myo October 30, 2010 at 7:18 PM
SHWE ZIN U October 31, 2010 at 12:28 PM
ချက်ခြင်း အနုပညာ ကို နှလုံးသွင်း ခံစားပြီး ပြန်သွားပြီဗျာ
TURN-ON-IDEAS October 31, 2010 at 9:39 PM
မကြီးချက်တဲ့နည်းက သူငယ်ချင်းအမေ သင်ပေးသွားတဲ့ နည်းနဲ့ အတူတူပဲ...
အန်တီက ဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျန်နေသေးရင် မသိုးအောင်လို့တဲ့၊ ကြာရှည်ပိုခံတယ်တဲ့...
ကျနော်လဲ အဲ့အန်တီ သင်ပြီးနောက် ကိုယ့်ဟာကိုယ် ၃ခါလောက် ချက်ဖူးတယ်...
တခါက အရောင်တင်မှုန့်ကို အနီလား၊ လိမ္မော်လားလို့မေးတာကို အနီလို့ မှားဝယ်မိတာ ထည့်ပြီးတော့မှကြည့်တော့ ဆိုးလိုက်တဲ့ အရောင်၊ နောက်တခေါက်ကျမှ လိမ္မော်ရောင်ထည့်မှ အမှန်ဖြစ်သွားတယ်...
ပြဿနာက ထမင်းမွှေခြင်းအတတ် မကျွမ်းကျင်တော့ ဆန်နည်းနည်းကျိုးသွားတဲ့အခါ ဒန်ပေါက်က သိပ်မလှတော့ဘူး...
အဲ့လို အကျအန မချက်တတ်ပါဘူးတော့။
ဖြစ်သလို အလွယ်နည်းပဲ ချက်တတ်တယ်..။
ဒန်ပေါက်ချက်မယ်ရည်ရွယ်ပြီးး ဆား ဂျင်း ကြက်သွန်ဖြူ
ကိုယ်တိုင်ကတော့ သိပ် မစားဖြစ်။